Cotton jiro sy ny savoka paraffine labozia - China Litbright Candle (Shijiazhuang)
Cotton jiro sy ny paraffine labozia savoka
Fototra Info Model No .: G75-0450H Type: Tapered Material: Paraffin ny savoka Usage: fandevenana, Holiday, SPA, Fivavahana, fampakaram-bady, Antoko, Birthday, Home Jiro, HAINGOTRANO andrakitra: Lighting Color: White tsirony: Unscented Size: 7 * 10cm fandoroana Time: 8H Processing: milina Different Sizes: Tsara Quality Additional Info fonosana: boaty fonosana Famokarana: 30 taonina isan'andro Brand: Litbright Fitaterana: Ocean, Land, Air toerana niaviany: China Supply Fahaizana: 3 × 20 'fcl Certificate: AK BSCI Ou ...
Modely No .: G75-0450H
Samihafa Sizes: Tsara Quality
Vokatra: 30 taonina isan'andro
Supply Fahaizana: 3 × 20 'fcl
Taratasy fanamarinana: AK BSCI
Ny ara-nofo dia 100% ny iray Paraffin ny savoka ny hafa dia 70% paraffin savoka, ary 30% menaka voanio. Ny lehibe indrindra dia ahitana vokatra Wholesale White Andry labozia, multi-tokantrano labozia miloko ho ravaka, labozia fotsy mamirapiratra, maro loko mamirapiratra labozia, fotsy fluted labozia, maro mena fluted labozia, taper labozia fotsy, multi-taper labozia miloko. Ny labozia natao ny tsara indrindra ara-nofo mangenahena, ireo zavatra ireo ny toetra tsara sy ny mandroso teti-dratsiny, izay malaza eo amin'ny mpanjifa.
Litbright Candle Factory dia naorina teo an nineties taonjato farany. Amin'ny maha-orinasa mpanamboatra miaraka amin'ny tanibe Shina, dia efa mihoatra ny 10 taona ny fanondranana labozia. Ny orinasa dia tokony ho 48.000 faritra metatra tora-droa, ary isika dia iray amin'ireo labozia lehibe indrindra mpanamboatra ao Hebei. Manana ny 800skilled mpiasa sy 40 teknisiana. Ny famokarana fahaiza-: 4 × 20 'fitoeran / andro. Ireo zavatra ireo ny toetra tsara sy ny mandroso fikasana, izay tena malaza eo amin'ny mpanjifa. Ny vokatra efa naondrana any Amerika, Eoropa, Afrika sy Aostralia, sns mihoatra ny valo-polo firenena.
Customer famantarana: ekena
General maso amin'ny mpamatsy manamboatra alohan'ny
antoko fahatelo maso: ekena
rehetra vokatra na ny toetra simba olana (ankoatra ny fahavoazana nandritra ny transporation) dia mety ho ao amin'ny manolo mba manaraka.
Izay mety ho vokatra na ny toetra simba olana izay mahatonga ny mpanjifa ny fatiantoka azo onitra ny mba manaraka.
Previous: tokantrano labozia fotsy
Next: Ara-pivavahana Andry fotsy Candle
Bougie En Frantsa Labozia Hot Sell
Ghana tsena tapa-kazo labozia fotsy
tokantrano labozia fotsy
Pure paraffine savoka labozia fotsy